Uncategorized – xem-bao-viet
कुस्त पैसा, वाइल्ड मस्ती र क्युट गर्ल । यस्तै कल्पनामा बाँचिरहेको पुरुषको जीवनमा फिल्मी शैलीमा च्याटरुमबाट जब फुत्त ‘रूपवती’ र ‘धनवती’ युवतीको प्रवेश हुन्छ । त्यसपछि के होला ? तिलस्मी पारामा इन्ट्री मार्ने त्यस्ता रूपवती युवतीसँगको लसपसले निम्त्याउने सकसपूर्ण उतारचढाव श्रीपल जैनलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला ? झन्डै दुई वर्षअघि डायना सेकेन्डले श्रीपल जैनको जिन्दगीमा भर्चुअल वल्र्डबाटै इन्ट्री […]
प्रदेश ५ मा लुम्बिनी दर्शनदेखि विश्वमै दुर्लभ रहेको पाटेबाघसम्मको अवलोकन गर्न पाइन्छ ।- भूगोल, संस्कृति, रहनसहन र जातीय विविधतालाई समेट्न प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’को संज्ञा दिएको छ । समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानिएको छ । स्थलमार्गबाट मुलुकमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने रुपन्देहीको बेलहिया नाका छ । त्यसबाहेक बाँकेको नेपालगन्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र पश्चिम नवलपरासीको […]
September 30, 2020 October 25, 2020 adminLeaveaComment on फुर्सदमा टिकटकः लक डाउनपछि बढ्दो क्रेज
पछिल्ला वर्ष चर्चा कमाइरहेको सामाजिक संजाल हो– टिकटक । आफ्नै आवाजमा वा कसैको संगीतमा अभिनय गरेर भिडियो पोष्टका लागि टिकटक चर्चित छ । फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्स्ट्राग्राम जस्तै टिकटक पनि एक भिडियो सेयरिङ प्ल्याटफर्म हो । सन् २०१६ मा लन्च भएको यो एप विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विशेषगरी लक डाउनपछि फुर्सदिलो समयमा आम […]
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले उनलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको छ । एकै किसिमका माग राखेर उनी अनशन बसेको यो १९औं पटक हो । उनी अनशन बसेको मंगलबार १६ दिन पुगेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार तथा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दा पनि […]